musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiGerman Vanotamba Toni Kroos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nhoroondo Yese yemuongorori wepakati peimba anonyanyozivikanwa neNickname; "Muiti". Yedu Toni Kroos Childhood Nyaya pamwe Untold Biography Facts inounza iwe zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hukama hwehukama, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF-Pitch zvishoma zvisingazivikanwi pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvehutano hwake asi vashomanana vanofunga nezveToni Kroos Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Toni Kroos Kuberekwa Kwebhuku Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Toni Kroos akaberekwa musi we 4th weJanuary 1990 muGrifswald, East Germany.
Akaberekwa kuna amai vake, Birgit Kämmer (aimbova muGermany badminton mutevedzeri uye mudzidzisi wezvino yemitambo yezvidzidzo) uye baba, Roland Kroos (aimbova wrestler wechechi uye mudzidzisi webhola).
Kukura pamwe nemukoma wake Felix, Toni aive nezvose zvaakamboita achiri mwana. Zvaisava zvakaoma kuti vabereki vake vamuone achikura.
Panguva yehuduku hwake, haasi iye mudzidzi akakurumbira uye akapedza nguva yakawanda achiita bhora mukutora chikoro mumakwikwi echikoro. Mukuwedzera, Toni aive akazvibata mukirasi uye aidikanwa zvikuru pakati pezera rake kuchikoro.
Kukura, zvinofungidzirwa kuti Toni haana kumbofungidzirwa semupiki ane ruzivo asi akazotsvaka kubudirira kuburikidza nekushanda zvakaoma zvose pamatambudziko. Mafungiro aya akazopedzisira aibva kumabasa ake emagetsi emagetsi ekudzidzisa iye nemukoma wake, Ferikisi.
Felix naToni Kroos 'basa revechidiki- Zvibasa zvebaba vavo, Roland
Zvisinei, pane nyaya ne multitasking. Kusangana kwebhokisi nemabhuku ekuverenga kwaiva kusimba kwake. Akasarudza kutarisa kune yekutanga uye akaisa pfungwa pane zvishoma. Zvakanaka, Toni Kroos akanga asiri mudzidzi akanaka paakauya kuzoongorora. Akapa mune zvose kuedza kwebhola.
Rimwe nguva mukomana muduku akaisvonaka haana kumbova mwana wechidiki.
Toni akanga akagadzirira kune imwe nhanho yeupenyu hutsva munzira. Basa rake rakaoma uye kubudirira zvakajeka paakazova nhengo yeboka rekutanga reBayern Munich panguva ye17.
Kubvira panguva iyo, kunyanya mushure meClincombe yeNyika ye2014, nyika inoziva Toni kuti ive imwe yevakanakisisa veArchetypes yomudzimai wemazuva ano anorwisa.
Toni Kroos Kuberekwa Kwebhuku Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Kroos ave aine musikana wake wenguva refu uye musikana wekoroji mudikanwi Jessica Farber. Waka Wake wakanaka aiva chikonzero chekubudirira kwake muhuduku hwake. Sezvo nzira yekumupa mubayiro, Toni aifanira kumusimudzira semunhu oga wemwoyo wake.
Rudo Rweshiri Shiri- Toni naJessica
Jessica akanaka uye ane mwoyo wakanaka. Ndiye nyanzvi inozivikanwa mumutambo wekushanyirwa kwekuGermany uye inozivikanwa inoramba iri kure neWAG-existence yekare (tsanangudzo iri pasi apa).
Akatanga kusangana naToni zvakare pavakanga vari kuchikoro pamwe chete nenguva yaakatarisana nekutambudzika kwekubatana nebhola nevadzidzi. Akamubatsira pamudzidzo, nzira yakanakisisa yaaizoita. Mhuri mbiri idzi dzakaratidzwa sedzisingaparadzaniswa kubva panguva yavakasangana nayo.
Ramangwana raToni ringadai rave rine chero mukadzi waaida, asi Jessica ndiye chete musikana waaifarira kunyange nevamwe vakawanda vakaratidza kufarira. Ichokwadi, Toni haana kuparadza nguva yake nevamwe vasikana.
Jessica Farber ndomukadzi ane rudo ane rudo uyo haagoni kuenzaniswa nezvimwe zvizhinji Vatambi veGermany'ngoro dzinofungidzirwa mune zvisikwa. Jessica Farber anosarudza nemaune maruva panzvimbo pekuve ari munzvimbo dzinoonekera.
Pazuva 13th raJune 2015, Jessica naToni vaiva neukwati hwepachivande. Vakaroora mushure mekunge vaine mwanakomana wavo wekutanga kunze kwechato.
Mwanakomana wavo wokutanga, Leon akaberekwa musi we 14th waAugust 2013. Mwana wechipiri, mwanasikana, Amelie akaberekwa musi wa 20 July 2016. Toni ndibaba chaiye vanowana nguva yakanakisisa yevana vake sekuonekwa pasi apa.
Kroos anorondedzera mudzimai wake, Jessica Farber semutsigiri wake mukuru kunze kwebhola. Kunyange zvazvo Jessica Farber asingaiti mibvunzurudzo, nguva dzose anowanikwa akatendeka pamabasa eglabhu nemabasa enyika sezvaanozivikanwa neOktoberfest sezvinoonekwa pasi apa.
Toni naJessica kuOctoberfest
Toni Kroos Kuberekwa Kwebhuku Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Kusvikira bhodhi raizomubhadhara, Toni Kroos akanga ari kubva kumhuri yepakati-kati yemhuri.
Baba vake Roland Kroos vaimbova wrestler wechipfumi uyo akazove mutya wechidiki. Iye ndiye mudzidzisi wechidiki weHansa Rostock sai panguva yekunyora.
Akatanga hudiki hwake kudzidzira basa nekutanga, kudzidzisa vanakomana vake vaviri kuGrifswalder SC. Kroos anotaura nezvehuduku hwake nekurangarira kwakanaka kwekumhanya uye kudzidziswa nguva dzose nehanzvadzi yake nababa.
Ronald Kroos- Kuisa Nheyo Yakanaka yemwanakomana wavo
Birgit Kämmer Kroos (mifananidzo iri pasi apa) ndiye mumi mutsva weToni Kroos uye Mukadzi waRandand Kroos.
Birgit Kämmer- Amai Toni Kroos
Akaberekwa June 16, 1962, muGriifswald. Birgit Kämmer ndiye aimbova mutambi weGermany badminton uyo akafanana nomwanakomana wake, akaita kuti nyika yake izvirumbidze. Birgit akakunda mubasa rake maviri DDR singles dzinyorwa uye mazita masere eDDR mazita eimba yake yekimba Greifswald.
Birgit Kroos anogara muRostock nhasi. Iye zvino anoshanda ikoko semudzidzisi wezvinyorwa uye zvemitambo. Vanakomana vake vanoramba vachiita mitambo yemhuri sevashandi vebhola.
Muduku Hama: Toni Kroos ane hanzvadzi yechidiki anonzi Felix Kroos.
Akaberekwa musi we 12th waMarch 1991 (1 gore duku kuna Toni). Mutevedzeri webonde, uyo akazviti haana kunyanya kubatikana nekudzidza zvakare kuchikoro ave achida kutamba mutambo nguva dzose.
Kunyange zvakadaro zvinosuruvarisa mumumvuri wehama yake yakabudirira yakatsvuka, Felix Kroos akawana makanho ekukwikwidza kwekukwikwidza kune zvakawanda zvakanyanyisa kupfuura Toni.
Aimbova Werder Bremen, Ferikisi akarwisana kuti apiwe pasi pachigaro chenguva dzose achitambira mumidhuri uye akatamira kuUnited Berlin kwe € 500,000. Nhamba yake yezvinyorwa zvishoma chaizvo chaizvo zvakaenzaniswa nehanzvadzi yake yakakura, asi akakunda 2007 'Tare Yegore' mubayiro muMecklenburg-Vorpommen.
Felix akaratidza kushandiswa kwakakura muhupenyu hwake, atanga semunhu anotungamira, asi ave achitamba zvakare kusvika pakati-hafu yekutora nguva yemutambo mubasa rake. Anorumbidza baba vake uye aimbova mudzidzisi (ona pasi apa) nezvekubudirira kwose iye nemukoma wake vakawana.
Muduku Felix naBaba; Roland Kroos
Toni Kroos Kuberekwa Kwebhuku Plus Untold Biography Facts -The World Cup Fact
Kune vakawanda, izvi zvinouya sechishamisi, asi hachisi chaicho kana iwe uchifunga kuti 2014 yaiva German team team's First World Cup kukunda sezvo nyika yakabatanazve mu1990.
Isati yasvika, East Germany yakanga isingabatsiri pamusangano wepasi rose zvichifananidzwa nevavakidzani vayo vekuMadokero.
Iye zvino, chii chiri Toni Kroos Fact ?? ... ..Truth ndeye ... Ndiye iye oga muboka rose re2014 World Cup-rakakunda munharaunda yeEast German. Anobva kuGriifswald, Mecklenburg-Vorpommen.
Paakaratidzwa nechokwadi, Kroos pachake pachake akaonekwa sechishamisika, kumubvunzurudza, "Ndiri ini ndoga here? Handisi kunyanya kuyanana nenguva idzodzo sevabereki vangu. "
Toni Kroos Kuberekwa Kwebhuku Plus Untold Biography Facts -Chikonzero shure kwezita rake rekudaidza
Saka kubwinya ndiko kukwanisa Kroos kudarika, kuti akawana zita rezita "Garcon" or "Mutevedzeri"Munguva yeChirungu yeNyika yezhizha.
Kroos aive achidyisa vashandi vake pamwe chete nemafaro ekufambisa uye achivaisa zvakanaka mumutambo uyu, kuti nyika yakagadzikana yainzwa kuti yakakodzerwa nezita rainzi zita raakapedza 76 kunze kwe79 inopinda mumusangano wechikwata cheHNUMX World Cup nePortugal.
Statistically, Kroos ndiye akanga ari mutevedzeri wakanakisisa muutambo.
Toni Kroos Kuberekwa Kwebhuku Plus Untold Biography Facts -Career Summary
Kroos akatanga kutamba kechikwata chemukati Greifswalder SC, gare gare kutumira kune rimwe boka revechidiki Hansa Rostock. Kroos akatamira kune Bayern Munich's youth setup mu 2006. Kroos akamborasikirwa kusvika kumazuva e40 panguva yegore rechikoro nekuda kwekudzidziswa. nokuti 2007-08 yegore, pazera re 17, Kroos yakasimudzirwa kuenda kuBatern.
Muna 2006 Toni Kroos akatanga neboka revechidiki reBayern Munich. Akasimudzirwa kuboka rekutanga mu2007. Akanga ari makore 17 chete panguva iyoyo. Izvi zvakateverwa nechikwereti kuna Bayern Leverkusen munguva ye 2009 / 10. Akatamba mitambo ye33 kwavari. Akapedzisa nguva iyoyo ne 9 zvinangwa uye 12 kubatsira.
Kubudirira paBayern Leverkusen kwakaita kuti adzokere kuBayern Munich mukombe wakatevera. Akakunda mazita eChNUMX Bundesliga, Champions League neBayern Munich uye 3 FIFA World Cup (2014 zvinangwa uye 2 kubatsira). Akange asinganzwisisi kuti asakunda Golden Ball iyo yaenda Lionel Messi. Akaendeswa kune Real Madrid nokuda kwemari isina kufanirwa muC2014.
Toni Kroos Kuberekwa Kwebhuku Plus Untold Biography Facts -Zvaachayeukwa pamusoro pekunge apedza basa
Nokuda kwake kupfuura kwakarurama, nzira, maonero uye kukwanisa kwake kugadzirisa zvinangwa, pamwe chete nemarefu ake shots uye bhora kutakura kubva pazvigadziro-zvidimbu.
Nokuva nesimba uye kushanda zvakaoma.
Nokuda kwake kushandura, simba remuviri uye kukwanisa kutamba munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Nokuda kuva muchengeti wemitambo yakadzika, ari panhivi, mubhokisi-kusvika-bhokisi basa, kana kunyange semudziviriri anodzivirira.
Nokuda kwekugona kwake zvose kuputsa kutamba, kuchengetedza zvigaro, uye kuumba mikana yevadzidzi vekwataiti.
Antonio Rudiger Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts